हबल्दारपुरका चिडीमारले नयाँ पक्की घर उपहार पाए - नेपालबहस
हबल्दारपुरका चिडीमारले नयाँ पक्की घर उपहार पाए
| १५:५७:०२ मा प्रकाशित
२७ पुष, बाँके । कोहलपुर नगरपालिका–१४ हबल्दारपुरका ३४ घरपरिवार चिडीमारले नयाँ पक्की घर उपहार पाएका छन् । सुदुरपश्चिम प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत त्यहाँका ३४ घर चिडीमारले नयाँ पक्की घर उपहार पाएका हुन् । बराण्डा र शौचालयसहित दुई कोठे नयाँ पक्की घर पाएपछि चिडीमार बस्तीमा उत्सव छाएको थियो । नयाँ घर पाएपछि उनीहरु दङ्ग र प्रफुल्लित छन् ।
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, बाँकेले कोहलपुर नगरपालिका–१४ हबल्दारपुरका दुई ठाउँ गरेर ३४ पक्की घर बनाएका छन् । एक ठाउँमा १५ र अर्को ठाउँमा १९ गरी कार्यालयले कूल ३४ नयाँ पक्की घर बनाइदिएको हो । कार्यालयका प्रमुख रामआश्रय शाहले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा चिडिमारलाई ६१ घर बनाइदिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कोहलपुर वडा नं १२ मा ३४, १४ मा १५ र १५ नंमा १२ घर बनिसेकका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सङ्घीय सरकरको सशर्त अनुदानतर्फ ४३ वटा घर बनेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि वडा नं १२ मा ११ घर बनाउने सम्झौता भएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३३ घर बनेका थिए ।
वडा नं १५ मा १४ र वडा नं १४ मा १९ घर रहेका छन् । शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, बाँकेका प्रमुख शाहले बाँके र बर्दियामा प्रदेश जनता आवास समन्वय समितिको निर्णयानुसार एक हजार ३७ र पुरानो सङ्घीय कार्यालयबाट निर्माणाधीन ८२९ गरी एक हजार ८६६ मध्ये एक हजार ३५५ घर बनिसकेको जानकारी दिए । सरकारले एउटा घर बनाउन रु तीन लाख ३६ हजार दिएको थियो ।
घरमा आगलागी हुँदा साढे सात लाखकाे क्षति २ महिना पहिले
फुलवारीमा खरले छाएका घरहरु ३ महिना पहिले
काभ्रेमा सडक स्तरोन्नति धमाधम १४ घण्टा पहिले
बेलायतमा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ९७ हजार भन्दाबढी १३ घण्टा पहिले
न्युज लाइन्स मिडियाको चौथौ वार्षिकोत्सव सम्पन्न १७ घण्टा पहिले
हात्तीले भत्कायो आरक्ष विस्थापितका झुपडी १३ घण्टा पहिले
चिसो मौसममा तातोपानीले नुहाउँदा शरीरलाई नोक्सान ५ दिन पहिले
सरकारको कदमलाई सडकबाटै सच्याइने प्रचण्डकाे चेतावनी ३ दिन पहिले
निगमकाे न्यारोडबडी जहाज आज राती मकाउ उड्ने ७ दिन पहिले
यथार्थ विवरणप्रति सु–सूचित रहेर समाचार सम्प्रेषण गर्न आग्रह ३ दिन पहिले
तास खेलिरहेको अवस्थामा २४ जुवाडे पक्राउ ६ दिन पहिले
आयकर बुझाउने समयावधि आगामी चैत मसान्तसम्म थप गर्न माग २ हप्ता पहिले
सोल्टी अपार्टमेन्ट आगलागीबाट २३ जनाको सकुशल उद्धार ७ दिन पहिले
बजार वृद्धि हुँदा पनि आजको मैनवत्ति भने रातो, २००० लाई टेवा बनाउन खोजेको हो ? ४ हप्ता पहिले
अमेरिकी तल्लो सदनबाट ट्रम्पलाई हटाउने प्रस्ताव पारित २ हप्ता पहिले
भोलिदेखि सिंगटी हाइड्रो इनर्जीकाे १४ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन हुँदै १ हप्ता पहिले
नयाँ वर्षमा अत्यावश्यक बाहेकको यात्रा नगर्न चिनियाँलाई आह्वान ४ हप्ता पहिले
ट्रकको ठक्करबाट गुल्मीमा दुई जनाको मृत्यु ४ हप्ता पहिले
अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गर्ने तुलसी थापा पक्राउ ५ दिन पहिले
गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या ७५ ! ८ महिना पहिले
आज थोरैले वृद्धि भएको बजारलाई विश्लेषण गरेर हेर्दा ? २ हप्ता पहिले
बिहानै सिन्धुपाल्चोक केन्द्रबिन्दु भएर ६ रेक्टर स्केलको भूकम्प ४ महिना पहिले
एमसीसीमार्फत नेपालमा अमेरिकी सेनाको प्रवेश ! ओलीलाई सकस १ वर्ष पहिले